Wararkii ugu dambeeyay Qaraxa ka dhacay Maqaayadda Luul Yamani iyo Booliska Soomaaliya oo kahadlay | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Wararkii ugu dambeeyay Qaraxa ka dhacay Maqaayadda Luul Yamani iyo Booliska Soomaaliya oo kahadlay
Qaraxa ayaa la sheegay in loo addegsaday mooto Gaari nooca FEKON laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa si uu sheegay Afhayeenka Booliska, waxaana jira guryo ka agdhawaa Maqaayadda oo dumay kadib saameyn xooggan oo uu ku yeeshay qaraxu, iyadoo la sheegayo khasaaro soo gaaray dadkii ku noolaa xaafadahaasi.
Taliska Booliska Soomaliya ayaa ka warbixiyay Qarax khasaaro gaystay oo caawa fiidkii ka dhacay Magaalada Muqdisho, gaar ahaan Maqaayadda luul Yamani oo ku taalla Degmada Xamarjajab ee Gobolkani Banaadir.
Afhayeenka Booliska Soomaaliya oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay khasaaraha ka dhashay Qaraxa, waxaana Afhayeenku uu sheegay in ka badan 10 ruux ay ku dhinteen Qaraxa, halka dhaawacuna uu yahay 30 ruux.
Afhayeenka ayaa intaa ku daray in uu jiro khasaaro hantiyadeed oo ka dhashay Qaraxa, waxaana bur-bur xooggan uu soo gaaray dhismaha Maqaayadda iyo xaafado ka agdhawaa aagga qaraxu ka dhacay.
Wararkii ugu dambeeyay Qaraxa ka dhacay Maqaayadda Luul Yamani iyo Booliska Soomaaliya oo kahadlay was last modified: March 5th, 2021 by Admin
Dowladda Turkiga oo war kasoo saaray qarixii maqaayaladda Luul Yemeni